သေခြင်းဆိုတာ ဘဝရဲ့ ထာဝရနိဂုံးမဟုတ်– ယေရှုနဲ့ လာဇရုတို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကနေ သင်ယူရရှိ (ယောဟန် ၁၁)
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သေခြင်းတရားကြောင့် ခံစားရတဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သေခြင်းတရားကို အောင်နိုင်ဖို့ လူတွေ ကြိုးစားကြ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သေခြင်းဆိုတာ ဘဝရဲ့ ထာဝရနိဂုံးမဟုတ်
အိမ်ရှင်နဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာလဲ
သမ္မာကျမ်းစာက ဘဝပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပုံ “ကျွန်မကို ယေဟောဝါဘုရား ပစ်မထားဘူး”
သေဆုံးသွားသူတွေ အသက်ပြန်ရှင်လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်
ကင်းမျှော်စင် | ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄
ဖတ်လို ကင်ဘွန်ဒူ ကင်ယာဝန်ဒါ ကန်နာဒါ ကရီအို ကာဇက် ကာတာလန် ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီရွန်ဒီ ကွန်ဂို ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂါ ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆန်ဂို ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇန်ဒီ ဇူးလူး ညာနက်ကာ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တာတာ တီဂရင်ယာ တီရှီလူဘာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒန်မီ ဒိန်းမတ် နီပေါ နော်ဝေး ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပါပီယာမန်တို (အရူးဘာ) ပါရှန်း ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဘင်ဂါလီ ဘစ်လာမာ ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား မလေး မာယာ မာရသီ မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မူအာရေး မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဂန်ဒါ လူအို ဝေယူနာအီကီ ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဘွန်ဒူ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အိုတီတီလာ အိုရိုမို အီတလီ အီလိုကို အူရ်ဒူ အေမာရာ အေးဝေး
မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး | သေခြင်းဆိုတာ ဘဝရဲ့ထာဝရနိဂုံးလား
သေခြင်းဆိုတာ ဘဝရဲ့ ထာဝရနိဂုံးမဟုတ်
ဗေသနိရွာဆိုတာ ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေ နှစ်မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်တယ်။ (ယောဟန် ၁၁:၁၈) ယေရှုမသေခင် အပတ်အနည်းငယ်က အဲဒီရွာမှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယေရှုရဲ့ မိတ်ဆွေရင်း လာဇရုဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ အပြင်းဖျားပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။
ယေရှု ဒီသတင်းကို ကြားတဲ့အခါ လာဇရု အိပ်ပျော်နေတယ်၊ သူ့ကို သွားနှိုးရမယ်လို့ တပည့်တွေကို ပြောတယ်။ (ယောဟန် ၁၁:၁၁) ဒါပေမဲ့ ယေရှုပြောချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းကို တပည့်တွေ နားမလည်တဲ့အတွက် “လာဇရု သေပြီ” လို့ ကိုယ်တော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောခဲ့တယ်။—ယောဟန် ၁၁:၁၄။
လာဇရုကို သင်္ဂြိုဟ်ပြီး လေးရက်အကြာမှာ ဗေသနိရွာကို ယေရှု ရောက်လာပြီး လာဇရုရဲ့အစ်မ မာသကို နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်။ မာသက “သခင်၊ ဤတွင် ကိုယ်တော်ရှိတော်မူခဲ့လျှင် ကျွန်မ၏မောင် သေမည်မဟုတ်ပါ” လို့ ပြောတယ်။ (ယောဟန် ၁၁:၁၇၊ ၂၁) အဲဒီအခါ ယေရှုက “ငါသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြသောသူသည် သေလွန်သော်လည်း အသက်ပြန်ရှင်လိမ့်မည်” လို့ပြန်ပြောတယ်။—ယောဟန် ၁၁:၂၅။
ယေရှုဟာ သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေ မှန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ဖို့ သင်္ချိုင်းဂူရှိရာကိုသွားပြီး “လာဇရု၊ ထွက်လာလော့” လို့ အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ (ယောဟန် ၁၁:၄၃) သေသွားတဲ့ လာဇရု ပြန်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါ အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတွေ အံ့ဩသွားကြတယ်။
အဲဒီမတိုင်ခင်ကလည်း သေဆုံးသွားသူ နှစ်ယောက်ကို အသက်ပြန်ရှင်အောင် ယေရှု လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ တရားဇရပ်မှူးယာဣရုရဲ့ သမီးလေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီသမီးလေးကို အသက်ပြန်ရှင်အောင် မလုပ်ပေးခင်မှာ သူ အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ ယေရှု ပြောခဲ့တယ်။—လုကာ ၈:၅၂။
လာဇရုနဲ့ ယာဣရုရဲ့ သမီးတို့ သေတဲ့အခါမှာ ယေရှုက သေဆုံးတာကို အိပ်ပျော်တာနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ ဒီလိုခိုင်းနှိုင်းတာက သင့်တော်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါ ဘာမှမသိတော့ဘူး။ နာကျင်မှု၊ ဝေဒနာတွေလည်း မခံစားရတော့ဘူး။ (ဒေသနာ ၉:၅; “သေခြင်းက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတာနဲ့တူ” ဆိုတဲ့ လေးထောင့်ကွက်ကို ကြည့်ပါ။) ယေရှုရဲ့ ရှေးခေတ်တပည့်တွေက သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ကြတယ်။ “သစ္စာရှိသူတွေ သေဆုံးသွားတာဟာ အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့တူပြီး သင်္ချိုင်းဟာ သူတို့အတွက် အနားယူရာနေရာနဲ့တူတယ်လို့ ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေ နားလည်ထားကြတယ်” * ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖော်ပြထားတယ်။—Encyclopedia of Religion and Ethics.
သေသွားတဲ့သူတွေက သင်္ချိုင်းမှာ အိပ်ပျော်နေတာနဲ့တူပြီး ဘာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမှ မခံစားရဘူးဆိုတာ သိရလို့ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်သက်သာရာ ရကြတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်ုပ်တို့ သေသွားတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာနားလည်သွားတဲ့အတွက် သေခြင်းတရားကို ကြောက်ရွံ့နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
“လူသည် သေလျှင် အသက်ရှင်ပြန်ပါလိမ့်မည်လော”
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ညဘက်တွေမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်အနားယူရတာကို နှစ်သက်ကြပေမဲ့ ဘယ်သူက ထာဝစဉ်အိပ်ပျော်ချင်မှာလဲ။ လာဇရုနဲ့ ယာဣရုသမီး အသက်ပြန်ရှင်လာသလို သင်္ချိုင်းမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ သေလွန်သူတွေလည်း အသက်ပြန်ရှင်လာမယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သလား။
ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ဘိုးဘေးယောဘက သူသေတော့မယ်လို့ ခံစားရချိန်မှာ “လူသည် သေလျှင် အသက်ရှင်ပြန်ပါလိမ့်မည်လော” ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကို မေးခဲ့ပါတယ်။—ယောဘ ၁၄:၁၄။
ယောဘကိုယ်တိုင် သူ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားကို ဒီလိုပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်– “အကျွန်ုပ်ကို ခေါ်တော်မူ၍ အကျွန်ုပ် ပြန်လျှောက်ပါမည်။ လက်တော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူရာကို တောင့်တတော်မူပါလိမ့်မည်။” (ယောဘ ၁၄:၁၅၊ သမ္မာ) ယေဟောဝါဘုရားက မိမိကိုသစ္စာရှိရှိဝတ်ပြုပြီး သေသွားတဲ့သူတွေကို အသက်ပြန်ရှင်အောင် လုပ်ပေးချင်တယ်လို့ ယောဘ ဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်။ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကို ယောဘ တောင့်တနေတာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။
သေသွားတဲ့သူတွေကို အသက်ပြန်ရှင်အောင် ယေရှု လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေက သေခြင်းကို အောင်နိုင်တဲ့အစွမ်း ယေရှုကို ဘုရားပေးထားတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ‘သေခြင်း၏သော့များကို’ ယေရှု ပိုင်ထားတယ်လို့လည်း ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ (ဗျာဒိတ် ၁:၁၈) လာဇရု အသက်ပြန်ရှင်လာအောင် ယေရှု လုပ်ပေးခဲ့သလို သေသွားတဲ့သူတွေကို အသက်ပြန်ရှင်အောင် အနာဂတ်မှာလည်း လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သေသွားတဲ့သူတွေ အသက်ပြန်ရှင်လာအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိတွေကို ကျမ်းစာမှာ အကြိမ်ကြိမ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက ဘုရားကို သစ္စာရှိရှိ ဝတ်ပြုခဲ့တဲ့ ဒံယေလကို ဒီလိုအာမခံတယ်– “မြေမှုန့်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာ အိပ်နေလော့။ နေ့ရက်ကာလကုန်ပြီးမှ ကိုယ့်ဝေပုံကိုခံရန် ထမြောက် [အသက်ပြန်ရှင်] ရလိမ့်မည်။” (ဒံယေလ ၁၂:၁၃၊ သမ္မာ) အသက်ပြန်ရှင်လာမယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားပေးကတိကို မယုံတဲ့ ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဇဒ္ဒုကဲတွေကို ယေရှု ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကိုလည်းကောင်း မသိသောကြောင့် လွဲမှားကြ၏။” (မဿဲ ၂၂:၂၃၊ ၂၉) ကျမ်းရေးသူ ပေါလုကလည်း ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက် [အသက်ပြန်ရှင်] ကြလိမ့်မည်ဟူ၍ . . . ကျွန်ုပ်လည်း ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု၍ မျှော်လင့်ပါ၏။”—တမန်တော် ၂၄:၁၅။
သေသွားတဲ့သူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ အသက်ပြန်ရှင်လာကြမှာလဲ
ဖြောင့်မတ်တဲ့သူ၊ မဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ အသက်ပြန်ရှင်လာကြမှာလဲ။ ကောင်းကင်တမန်က ဖြောင့်မတ်တဲ့ ဒံယေလဟာ “နေ့ရက်ကာလကုန်ပြီးမှ” ပြန်အသက်ရှင်လာမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ မာသကလည်း သေသွားတဲ့ သူ့မောင်လေးလာဇရုဟာ “နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာကာလ” မှာပြန်အသက်ရှင်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။—ယောဟန် ၁၁:၂၄။
သမ္မာကျမ်းစာမှာ “နောက်ဆုံးသောနေ့” ကို ခရစ်တော် အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်ဖော်ပြထားတယ်။ ကျမ်းရေးသူပေါလု ဒီလိုရေးခဲ့တယ်– “ဘုရားသခင်သည် ရန်သူအပေါင်းတို့ကို ခြေတော်အောက်၌ ချထားတော်မူချိန်တိုင်အောင် ခရစ်တော်သည် အုပ်စိုးရမည်။ ထိုအခါ နောက်ဆုံးရန်သူတည်းဟူသော သေခြင်းသည် ဆုံးၡုံးခြင်းသို့ ရောက်ရလိမ့်မည်။” (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၅၊ ၂၆) ဒီကျမ်းချက်က ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်လာဖို့နဲ့ ကိုယ်တော့်ရည်ရွယ်ချက် ဒီကမ္ဘာမှာ ပြည့်စုံလာဖို့အတွက် ဆုတောင်းရမယ့် ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ *
ယေဟောဝါဘုရားက သေသွားတဲ့သူတွေကို အသက်ပြန်ရှင်စေချင်တယ်ဆိုတာ ယောဘ ကောင်းကောင်း သိခဲ့တယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေ အသက်ပြန်ရှင်လာမယ့်နေ့ရောက်လာတဲ့အခါ သေခြင်းဆိုတာ နောက်ထပ်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “သေခြင်းက ဘဝရဲ့ထာဝရနိဂုံးလား” လို့လည်း ဘယ်သူမှ မေးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
^ စာပိုဒ်၊ 8 သေဆုံးသွားသူတွေကို မြှုပ်နှံတဲ့နေရာအတွက် ရှေးခေတ်ခရစ်ယာန်တွေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဂရိစကားလုံးက “အိပ်စက်ရာနေရာ” လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။
^ စာပိုဒ်၊ 18 ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်း ထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင် ယေဟောဝါသက်သေတွေ ထုတ်ဝေတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ အမှန်တကယ် သွန်သင်ရာက ဘာလဲ စာအုပ်ရဲ့ အခန်း ၈ ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ www.jw.org/mya ကနေလည်း ကူးယူလို့ ရပါတယ်။
သေခြင်းက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတာနဲ့တူ
“အကျွန်ုပ်မျက်စိကို လင်းစေတော်မူပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် သေခြင်း၌ အိပ်ရပါလိမ့်မည်။” —ဆာလံ ၁၃:၃၊ သမ္မာ။
‘ကိုယ်တော်က “ငါတို့အဆွေ လာဇရုသည် အိပ်ပျော်ပြီ။ သို့သော်လည်း သူ့ကိုနှိုးရန် ငါသွားမည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်တို့က “သခင်၊ သူသည် အိပ်ပျော်လျှင် သက်သာလာလိမ့်မည်” ဟုလျှောက်ကြ၏။ ယေရှုသည် လာဇရုသေဆုံးကြောင်းကို ဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်၏။’—ယောဟန် ၁၁:၁၁-၁၃။
“ဒါဝိဒ်မူကား မိမိလူမျိုးဆက်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်ပြီးလျှင် သေခြင်း၌အိပ်ပျော် [လေ၏။]”—တမန်တော် ၁၃:၃၆။
“ယခုမူကား ခရစ်တော်သည် သေခြင်း၌ အိပ်ပျော်သူတို့တွင် ဦးဆုံး ထမြောက်တော်မူပြီ။”—၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၀။
“မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသော အခြားသူများနည်းတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းမရှိစေရန် သေခြင်း၌ အိပ်ပျော်သူတို့အကြောင်းကို သင်တို့မသိဘဲ မနေစေလိုပါ။” —၁ သက်သာလောနိတ် ၄:၁၃။
“ကိုယ်တော်၏လူသေတို့သည် အသက်ရှင်ကြပါလိမ့်မည်။ ငါ၏အသေကောင်တို့သည်လည်း ထမြောက်ကြပါလိမ့်မည်။ . . . နိုး၍ သီချင်းဆိုကြလော့။”—ဟေရှာယ ၂၆:၁၉။
“မြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူများတို့သည် နိုးကြလိမ့်မည်။”—ဒံယေလ ၁၂:၂။
“သင်္ချိုင်းများမှာ ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သားတော်၏စကားသံကိုကြား၍ ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။”—ယောဟန် ၅:၂၈၊ ၂၉။
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄ | သေခြင်းက ဘဝရဲ့ ထာဝရနိဂုံးလား
ကင်းမျှော်စင် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄ | သေခြင်းက ဘဝရဲ့ ထာဝရနိဂုံးလား